भर्खरै बिमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको विमान दुर्घ`टना ! कुन कुन देशका मानिस उक्त विमानमा थिए पुरा जानकारिको लागि पुरा पढ्नुहोस – चितवन मिडिया
भर्खरै बिमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको विमान दुर्घ`टना ! कुन कुन देशका मानिस उक्त विमानमा थिए पुरा जानकारिको लागि पुरा पढ्नुहोस
भर्खरै बिमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको विमान दुर्घटना !देहताबाट ११० जना सवार जेट बिमान अफगानिस्तानमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। प्रान्तका स्थानीय अधिकारीहरुका अनुसार विमान काबुलको दक्षिण पश्‍चिममा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। विमान देहातदेखि दिल्लीको लागि उडेको थियो।
उक्त जहाजमा उड्ने वित्तिकै प्रावधिक समस्या देखिएका बताएकाे र कसरी दुर्घटना भयो भन्ने बारे अहिले नै एकिन नभएकाे अधिकारीहरू बताउँछन् । जेट विमान दुर्घटनाका अन्य कारणहरू पनि पत्ता लागिसकेकाे छैन ।
यसका साथै विमानमा केही प्राविधिक कठिनाइ आएपछि त्यहाको गजिनी जिल्लाको डेह याकमा दुर्घटना भएको जनाइएको छ। दुर्घटनाको थप विवरण आउन भने बाँकी छ। ताजा अपडेट हेर्दै गर्नुहाेला बिमान सडकमा उत्रियो, सबै यात्रु सकुशलटेलिभिजनले बिमानका सबै यात्रु सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।
बिमानमै यात्रारत टेलिभिजनका पत्रकारले सडकमा बिमान अबतरण गर्नेक्रममा बिमानका पाङ्ग्राहरु फुटेको बताए । इरानी नागरिक उड्डयन संस्थाले बिमान दुर्घटनाका बारेमा छानबिन शुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
काठमाडौं — काठमाडौंबाट जनकपुरतर्फ उड्नुपर्ने बुद्ध एयरको ‘माइक यांकी’ एटीआर विमान शुक्रबार जब पोखरा विमानस्थलको धावनमार्गमा अवतरण हुँदै थियो, एयरहोस्टेस लुमन्ती मानन्धर भन्दै थिइन्, ‘यात्रु महानुभावहरू हामी जनकपुर विमानस्थलमा आइपुगेका छौं । बाहिरको तापक्रम २२ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।’
उनले यति के भनेकी थिइन्, यात्रुको एकसाथ आवाज आयो, ‘यो जनकपुर होइन ! पोखरा हो, पोखरा !’ उनले ‘बुद्ध एयरलाई सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद’ भन्नै पाइनन् । धावनमार्गमा गुडिरहेको जहाजभित्रैबाट उनले ककपिटमा रहेकी क्याप्टेन रीता प्याकुरेललाई यात्रुको प्रतिवाद रिपोर्टिङ गरिन् ।
एयरहोस्टेस मानन्धरको सूचनापछि क्याप्टेन प्याकुरेल र को–पाइलट सुरेश कटवालले त्यतिबेला मात्रै थाहा पाए, जनकपुरका यात्रु पोखरा ल्याइएको । त्यतिन्जेलमा काठमाडौंबाट उडेको २५ मिनेट घर्किसकेको थियो । यता, काठमाडौं स्टेसनमा बुद्ध एयरले त्यतिबेला मात्रै थाहा पायो, जब पोखराकै लागि जान तयार भएको अर्को जहाजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई पोखरा उडानका लागि अनुमति माग्यो ।
बुद्धले दैनिक काठमाडौं–पोखरा ७ वटा उडान गर्छ । अन्तिम उडानको फ्लाइट नम्बर यूफोर–६०७ हुन्छ । ‘यो उडान नम्बरको जहाज त अघि नै उडेर पोखरा पुगिसक्यो,’ टावरबाट एटीसीले अर्को जहाज उडाउन तयार भएका क्याप्टेन मनोज केसीको टिमलाई जानकारी गरायो ।
उता पोखरामा होहल्ला गर्ने यात्रुहरूलाई जहाजबाट झारिएन । तत्कालै फर्किने निर्णय सुनाइयो । माइक यांकी जहाजले पोखराबाटै जनकपुर उड्ने अनुमति पायो । जनकपुर पुग्न १८ सय लिटर इन्धन थपियो । जहाजले पुनः यात्रु तथा कार्गोको तौल समेटिएको लोडसिट, फ्लाइट प्लान पोखरा विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने भयो । पोखरास्थित बुद्ध एयरको स्टेसनका कर्मचारीले इन्धन थप्दा, कागजात मिलाउँदा करिब ४५ मिनेट जहाज पोखरामा रह्यो ।
यो अवधिमा केही यात्रुले ककपिटको पछाडितिर फोटो सेसन गरे । काठमाडौंबाट सवा ३ बजे उडेको उक्त जहाज पोखरा अवतरणपछि ५ नबज्दै जनकपुर पुग्यो । पोखराबाट गोरखा मनकामना हुँदै ४० मिनेटमा जनकपुर पुगेको जहाजलाई क्याप्टेन प्याकुरेलले कुशलतापूर्वक बेलुकी ६ बजेअघि नै काठमाडौं अवतरण गराइन् ।
सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, शुक्रबार दिउँसो विराटनगर पुगेर फर्केकी क्याप्टेन प्याकुरेल, को–पाइलट कटवाल, एयरहोस्टेस मानन्धर र मेनुका गुरुङको उड्नुपर्ने दोस्रो गन्तव्य पोखरा नै थियो । तर, बिहानैदेखि तराईका विमानस्थलमा देखिएको मौसमी खराबीका कारण उडान तालिका प्रभावित भइरहेका थिए । प्रायः समयमै जहाज उड्न नसकेपछि समय धकेलिँदै–धकेलिँदै पछि सरे ।
बुद्धले जनकपुरका लागि तीनवटा उडान तालिका राखेकामा दिउँसो २ बजेको उडान समयमै भएन । २ घण्टाअघि नै विमानस्थलमा पुगेका यात्रुको दबाब विमानस्थलस्थित बुद्धको मार्केटिङ र ग्राउन्ड अपरेसनका कर्मचारी झेलिरहेका थिए ।
जनकपुर जाने यात्रुहरू सबै आइसकेकाले मार्केटिङले पोखराको उडानका लागि तयार रहेकी क्याप्टेन प्याकुरेललाई पठाउन तालिका ‘रिभाइज्ड’ गर्‍यो । यात्रुको उपस्थिति तथा जहाजको उपलब्धता र मौसममा हुने गडबडीका कारण वायुसेवाहरूले यात्रुलाई पूर्वजानकारी नगराई तालिका फेरबदल गर्न सक्छन् ।
तर, यसबारे उनीहरूको ग्राउन्डदेखि ककपिटसम्मको प्रणालीमा समयमै खबर हुन सकेन । त्यसैले पोखराका लागि तोकिएको जहाजमा जनकपुरका यात्रु परे ।
काठमाडौंबाट टेकअफ गर्नेबित्तिकै उडानलाई पोखरा नभई जनकपुरतर्फ मोड्न सकिन्थ्यो । तर, एयरहोस्टेसको दिमागमा जनकपुर जाँदै छौं भन्ने थियो भने ककपिटमा रहेका पाइलट पोखराका लागि नै उडिरहेका थिए । तर, उनीहरूलाई दिइने कागजातमा जनकपुर लेखिएको थियो । जहाज टेकअफ गर्नेबित्तिकै एयरहोस्टेसले उडानको समय, उचाइ र गन्तव्यमा पुग्ने समयबारे ब्रिफ गर्छन् । शुक्रबार एयरहोस्टेस मानन्धरले पनि बोर्डमा रहेका यात्रुलाई जनकपुर जान लागेको र उडान समय २५ मिनेट नै भनिन् । जहाज १० हजार फिट नपुग्दासम्म पछाडि बोर्डमा एयरहोस्टेसले गर्ने ब्रिफ तथा यात्रुको हल्ला ककपिटमा सुनिँदैन ।
पाइलटले पछाडिको संवादले डिस्टर्भ गर्ने भएकाले नसुनिने बनाएका हुन्छन् । यसलाई ‘स्टेरायल ककपिट रुल’ भनिन्छ । यही नियमका कारण शुक्रबार बुद्धका ती पाइलटले एयरहोस्टेसले भनेको ‘जनकपुरसम्मको उडान समय २५ मिनेट हुनेछ’ भन्ने सुन्नै पाएनन् । काठमाडौंबाट पोखरा र जनकपुर दुवै एटीआर विमानमा २५–२५ मिनेटमै पुगिने गन्तव्य हुन् । उडान समय पनि उस्तैउस्तै भएकाले हेक्का नभएको हुन सक्छ ।
उडिरहेको जहाजमा एयरहोस्टेसले जाने गन्तव्यको तापक्रम क्याप्टेनसँग सोधेर यात्रुलाई भन्नुपर्छ । मानन्धरले तापक्रम मागिन् । ककपिटले २२ डिग्री सेल्सियस भन्यो । सबैभन्दा पहिला काठमाडौंको धावनमार्गमै थाहा हुनुपर्ने थियो । त्यहाँ यात्रु राखिसकेपछि क्याप्टेनलाई मार्केटिङका कर्मचारीले यात्रु विवरण र उडान तालिका बुझाउँछन् । त्यहाँ कहाँको उडान हो भनेर लेखिएको हुन्छ । तर, शुक्रबार क्याप्टेन प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरिन् । एक प्रति ककपिटमा राखिन्, अर्को प्रति झ्यालबाटै ग्राउन्डमा रहेका कर्मचारीलाई बुझाइदिइन् । यदि उनले केही सेकेन्ड लोडसिट पढेको भए पनि जानकारी मिल्थ्यो । तर, उनले उडान हुनुअघि नै आन्तरिक टर्मिनलमा रहेको बुद्धको अपरेसन कन्ट्रोल सेन्टरबाट आफ्नो उड्नुपर्ने पोखरा नै भएको हेरफेर नभएको सूचना लिइसकेकी थिइन् ।
केही मिनेटमै भएको फेरबदलबारे उनलाई जानकारी भएन । बुद्ध एयरले यो घटनालाई आफ्ना विभागीय कर्मचारीहरूबीचको ‘मिसकम्युनिकेसन’ भनेको छ । एक अधिकारीका अनुसार, शुक्रबार यो घटनामा जोडिएका सबै कर्मचारीलाई आइतबार छुट्टै ब्रिफिङ राखिएको छ । घटनाबारे आन्तरिक छानबिन पनि सुरु गरिएको बुद्धले जनाएको छ । छानबिनपछि प्रतिवेदन नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाइने ती अधिकारीले बताए । बुद्धले यस्ता घटना हुन नदिन तत्काल नयाँ नियम लागू गर्ने जनाएको छ ।
एक उड्डयनकर्मीका अनुसार, एक दशकअघि बुद्धकै १९ सिट क्षमताको विराटनगर जानुपर्ने बिचक्राफ्ट १९०० डी विमान दुई जना पाइलटको मनमुटावका कारण भैरहवामा अवतरण भएको थियो । त्यस्तै, बैंककबाट काठमाडौं आएको थाई एयरको विमानले दशकअघि काठमाडौंका यात्रुको लगेज बैंककमै छाडेर लन्डन जाने यात्रुको लगेज बोकेर काठमाडौं आएको थियो । update nepal
टीकापुर घटनाबारे छिट्टै वार्ता टोली गठन गर्छौं : गृहमन्त्री थापा
६० प्रतिशतभन्दा बढीले पत्याउँदैनन् नेताका कुरा : सर्वेक्षण